Guddoomiyaha UCID: Doorkiisii Xadhigga UFO + Xatooyadii Xoolaha Dadweyne Ee Gaanni Ka Sii Daayay! W/Q Siciid Gahayr – somalilandtoday.com
Guddoomiyaha UCID: Doorkiisii Xadhigga UFO + Xatooyadii Xoolaha Dadweyne Ee Gaanni Ka Sii Daayay! W/Q Siciid Gahayr
20ka Feberweri waxa Somaliland looga yaqaannaa maalinta dhallinyarada Somaliland
waxaanay ka dhalatay xadhig, cadaadis iyo dil loo geystay macallimiin, aqoonyahanno iyo arday ka mudaharaadday xukun la saarayay dhallinyaro samafaleyaal ah. Waxa xadhigga raggaas kaalin ku lahaa Injineer Faysal Cali Waraabe, waxaanu qayb ka yahay murugada sannad walba laga xusayo halkii lagu dilay ardaygii diiddanaa in makamad la saaro macallimiintiisa oo Barre la odhan jiray.
Waxa xuskan taallo looga sameeyay dhinaca Woqooyi ee Maxkamadda Gobolka Maroodijeex. Maadaama oo ay Somaliland cafis qaadatay, arrinkan maxkamad laguma saarin Faysal Cali Waraabe.
Faysal waxa Muqdisho ugu xidhnaa xatooyo xoolo ummadeed, waxaana xeerku ahaa in la dilo qofkii lubsada 100,000 oo hantida ummadda ah. Waxa loo dilay Jibriil Aamiin oo ay ilmaabti ahaayeen Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon oo xitaa Muqdisho u yimi si uga ergeeyo dilka ilmaabtigii. Walaw uu Maxamed Siyaad Barre aqbalay, markii uu sidaas u laabtay Xasan Guuleed ayaa qudha laga jaray Jibriil Aamin. Faysalw axa taas ka badbaadiyay General Gaanni.
Mujaahid Maxamed Baaruud Cali Guddoomiyaha Guddida Xuquuqda Aadamaha ee Somaliland oo ka mid ahaa dhallinyaradii ururkii Ufo ee sanadkii 1981kii uu xabsiga ku guray taliskii Siyaad Barre , ayaa soo bandhigay qaabkii loo qab-qabtay iyo doorkii uu kulaa Faysal Cali Waraabebe xadhiggii uu taliskii kacaanku kula kacay wakhtigaas dhallinyaradii UFO.
Mujaahid Maxamed Baaruud Cali oo ka qayb-galay dood uu Tv-ga saab 20 bishii Feeberweri u qabtay xubno kamid ahaa ururkii Ufo, ayaa mar waxa laga weydiiyey qaabkii loo qabtay iyo cidii basaastay wakhtigasi wuxuu sheegay sidan:-“Qabashadayadii wuxuu warku ka baxay horena waan u sheegay oo in kastoo la igu qabsaday oo la yidhi dadku tuugtoodaba ma sheegaana adigu tuuggaaga maxaad u sheegaysaa, haddana waan u celinayaa.
Ninka la yidhaahdo Faysal Cali waraabe ee Guddoomiyaha ka ah Xisbiga UCID, isagoo u xidhan lacag berigaa la isku dili jiray boqol kun oo halka Xisbiga ku xidhan Xamar, ayaa ninkii la odhan jiray Gaanni ee Siyaad barre adeerka u ahaa ayaa loo soo bedelayey Waqooyiga.
Markaa Gaani ayaa doonay cid uu la kaashado oo barta dadkii Waqooyiga, markaa wuxuu yidhi ‘Faysal Cali Waraabe yaa arkay oo Faysal oo odhan jiray anniga ayaa ka madax ah xaggaas oo wax-walba waan kula qabanayaa haddii Ilaahay waqooyi ku keeno” markaa waxa lagu yidhi wuu xidhan yahay Gaani ayaad adeerkii ku noqday, markaana waxa joogay odayaal badan oo uu Aabbihii kamid yahay Faysal oo Xamar joogay in badan oo arki kari waayey lix bilood oo dhow-dhow xitaa Siyaad Barre. Markaa Gaani ayaa adeerkii ku noqday oo wuxuu ku yidhi “ninkii ila shaqayn lahaa, meel adagna waad igeysay hawl adagna waad ii dhiibtay ninkii ila shaqayn lahaana jeelka ayuu ku jiraa”. ‘Kaxayso’ ayuu ku yidhi ninka intaas oo qof uu ka diiday oo lixdaa bilood sugayey, markaa wuu soo kaxeeyey,wakhtigaas oo annagu aanu ka shaqaynaynay dhakhtarka ayuu keenay “ayuu yidhi Maxamed Baaruud Cali
Dhanka kalene waxa uu sheegay in Faysal Cali Waraabe markii uu Gaanni xabsiga ka soo daayey ee uu Hargeysa keenay inuu Faysal casuumay Maxamed Baaruud iyo rag kale oo ka mid ahaa Uffo, isla markaana uu ka dalbaday inay la shaqeeyeen Dowladdii Siyaad Barre, balse ay ka diideen, isagoo intaasi ka dib Faysal is baran Gaanni rag kale oo la qayili jiray dhalinta uffo, kuwaas soo xaday xogtii la doonayey “annaga wuuna casuumay Faysal Ramadaan ayey ahayd guriga Axmed Xuseen Caabbi meeshan shidhka la yidhaah-do ee Sheekh Bashiir agtiisa ahayd ayuu nagu casuumay.
Wuxuuna yidhi “ninka caynkaasi (Gaanni) saaxiib ayaanu nahay Isaaqa cadow uma aha. Saaxiib muddo is-yaqaannay baanu nahay. Noloshayda ayuu badbaadiyay, haddii aad aqoon u leedihiin, waad qiri lahaydeen waxa aan sheegayo. Dowladdani ee waxay cadow u tahay majeerteenka, markaa waxaan doonayaa in aad la shaqaysaan. Horumar ayeynu gaadhaynnaa. Gaashaanbuur aynu ka dhiganno, yaynaan cadaw ka dhigan”
Dadkayagii meesha joogay waxaanu isku raacnay intayadii meesha fadhiday, waxaanu ku nidhi “odayaasheenii waxay joogaan Hargeysa, Burco, Berbera iyo dhulkaas oo dhan ayey wada joogaan Waqooyi ayey wada joogaan siyaasiyiinteeniina waata Xamar joogta annagu rag cusub ayaanu nahay oo iminka uun waddanka yimi. Markaa annagu rag kaala xaali kara siyaasadda Waqooyiga ma nihin”
Sidaa awgeed wuxuu is baray marka taa aanu ka diidnay rag kale ayuu Faysal isbaray Gaanni, rag nala qayili jiray ayaa loo diroo guri kamid ah gur-yahayadii ayey ka soo qadeen Joornaalkan, lacag yar oo markaa gaadhaysa maxakamaddii ayaa laga sheegee waxana laga bixiyey laba iyo afartan kun oo Soomaali ah, waxaanay noqotay afar kun oo dollar, afar kun oo dollar ayaannu ku dhimannay 28-kayagaa nin aanu ku dhiman gaadhnay giddigayo .” Ayuu yidhi Maxamed Baaruud.
Faysal Cali Waraabe waxa uu ku laabtay Muqdisho, waxaanu Gaanni siiyay magacyada laba qof oo la shaqayn doona, sidoo kale wuxuu labadaas qof u sheegay General Maxamed Cali Samatar. Waxa magacyadaas loo soo gudbiyay Ibraahin Cid oo ahaa madaxii HANGASH ee Hargetsa, kaas oo maxkamaddii UFO ka sheegay in uu siiyay afartan kun oo lacagtii Soomaaliya ah una dhigmaysa $d4000. Waa kuwa ay HANGASH sheegeen in ay u keeneen warbixinta UFO ee lagu maxkamadeeyay 28ka dhallinyarada ah ee UFO.
Xilliga ay maxkamaddu dhacayso, labada qof ee HANGASH sheegtay in ay soo gudbiyeen joornaalkii iyo xogta UFO, ma ay joogin gudaha. Waxaanay u tallaabeen halganka SNM. Waxa ay kala ahaayeen Marxuun Mujaahid Aadan Cali Guhaad oo ka mid ahaa raggii la shahiiday Maxamed Mooge Liibaan 6dii Juun 1984kii iyo Xaji Cabdi Aw Cadde (Cabdi-Laangadhe) oo ah madax-dhaqameed xurmo leh oo ku nool maanta Hargeysa. Xaaji Cabdi wuu nool yahay waanu iska difaaci karaa eeddaas ay HANGASH ka sheegtay Maxkamaddii Badbaadada.
Faysal Cali Waraabe oo aan abtirsiinta adeer ugu ahay, waxa aan weydiin lahaa:
1. Muxuu ahaa horumarka aad sheegaysay ee Gaanni inna gaadhsiin lahaa?
2. Ma xasuuqa iyo xadhigga ayaa ahaa horu-socod?
3. Ma in uu kaa badbaadiyay “xatooyo xoolo dadweyne” ayaad kaga abaal-celisay in gudaha la dhigo 28 aan waxba galabsan?
4. Halkee ayaad joogtay 1988-1991 oo aanu annaga oo afarjir ah garaamkayagii qamaddida ahaa ugu deeqnay SNM?
5. Halkeed ku sugnayd markii dalku la soo noqday madax-bannaanida 18kii Mey 1991?
6. Haddii uu Gaanni sidan kuu badbaadiyay, waa maxay nacaybka aad Farmaajo iyo Maxamed Siyaad Barre u muujisaa?
7. Ma u diyaar tahay madal furan oo aad kaga jawaabto doorkii aad ku lahayd xadhigga UFO?
1. Buugga: The Mourning Tree (An Autobiography and a prison memoir) Author Mohamed Barud Ali, 2010 printed by Ponte Ivisible, Italy pages 34-35